Alshabaab Oo Weerar Gaadmo Ah Ku Dishay Askar – Heemaal News Network
Alshabaab Oo Weerar Gaadmo Ah Ku Dishay Askar
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday bar koontarool ay ciidamada dowladda ku lahaayeen meel ku dhow Tuulada Basra oo hoos tagta degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wararka ayaa sheegaya in iska hor imaad ka dhacay fariisinkaas lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in koontaroolka la weeraray ay ciidamada lacago canshuuro ah uga qaadayaan gawaarida isaga kala gooshta Balcad iyo Afgooye.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaas ay ku dileen illaa lix askari oo ka tirsan Ciidamada dowladda, sidoo kale askar kale ku dhaawaceen
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Balcad oo ku aadan weerarka lagu qaaday ciidamada fariisinka ku lahaa agagaarka Tuulada Basra.
Bilihii u dambeeyay Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada dowladda, iyadoo bishii hore oo kaliya ay weerar illaa lix saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda.
War Murtiyeed Laga Soo Saaray Shirkii Maamul-goboleedyada ee Kismaayo
Soomaali Dadka Tahriibin Jiray Oo Xabsi Daain Lagu Xukumay
Al-Shabaab Oo Dagaal kula Wareegay Qeybo ka mid ah Degmada Balcad
March 2, 2018 Soomaaliya
Dagaalo ayaa la soo sheegayaa iney weli ka socdaan gudaha degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe oo xoogag taabacsan Al-Shabaab maanta barqadii weerar lama filaan ah ku soo qaadeen. Al-Shabaab oo dhowr jiho ka soo galay […]
Dagaal U Dhaxeeya Ciidamada Dowlada iyo Al-Shabaab Oo ka socda Duleedka Balcad.
Dagaal xoog leh oo la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa goor dhow ka bilowday deegaan u dhexeeya degmada Balcad iyo Afgo0ye. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ay maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab ay fariisimo […]
Miino Raggii Dhigayay kula Qaraxday Duleedka Degmada Balcad.
October 31, 2017 Soomaaliya
Wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in ay miino kula qaraxday xalay deegaanka Daniga oo illaa 11km dhinaca Galbeed ka xiga degmada Balcad rag doonayay inay ku aasaan wadada isku xirta […]